Nagarik News - सहयोग कि असहयोग?
सहयोग कि असहयोग?
संसदीय दलको नेतामा पराजित भएपछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले बाहिरबाट हेर्दा सभापति सुशील कोइरालालाई पूरै सहयोग गरेजस्तो देखिन्छ। तर, यसो सोच्ने हो भने देउवाले कोइरालालाई सहयोग गरेका हुन् कि असहयोग? छुट्याउनै गाह्रो छ। राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार गठन गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेपछि पार्टीले सर्वदलीय बैठक राख्यो। सभापतिले देउवालाई बोल्न आग्रह गरे।
देउवाले 'बोल्ने कुरा केही पनि थिएन, बोल्नैपर्योक भनेपछि बोलेँ' भन्दै आफ्नो कुरा सुरु गरे, 'पार्टी सभापति एवम् संसदीय दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सहयोग गर्नुपर्योह।' त्यसको केही दिन बित्न नपाउँदै महामन्त्रीले पार्टीका सभासद्हरूलाई दिएको चियापानमा पनि त्यस्तै गरे। त्यहाँ पनि देउवाले भने, 'मेरो केही छैन, सभापतिले बोलेको कुरामा पूर्ण समर्थन छ।'
पार्टीभित्र झगडिया नेताका रूपमा चिनिएका देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा अन्य दलसँगको छलफलका लागि वार्ता टोलीको संयोजक हुन अस्वीकार गरे। उनले 'सभापतिलाई मात्र पार्टीको निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार रहेको' भन्दै सभापतितिरै देखाए।
आखिर पानीलौरो साबित
कांग्रेस महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले आयोजना गरेको चियापान समारोहमा सोही पार्टीका एक सभासद्ले एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालमाथि टिप्पणी गर्दै भने– 'पानीलौरो'। एउटा पार्टीको अध्यक्षलाई त्यो पनि अर्को पार्टीको सभासद्ले त्यतिसारो नभनेको भए हुन्थ्यो। तर, एमाले संसदीय दलको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा ती सभासद्को कुरा पुष्टि भयो।
मंगलवार अपराह्न भएको संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा खनाल स्थायी समिति सदस्य केपी ओलीसँग २३ मतले पराजित भए। १ सय ७३ जना सभासद्मध्ये खनालले ७५ मतमात्रै प्राप्त गरे।
पार्टीको इतिहासमा संसदीय दलको नेताका लागि पहिलो पटक भएको चुनावमा पार्टी अध्यक्ष नै पराजित भए। त्यो पनि, झन्डै दुई दशक पार्टी नेतृत्व सम्हालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको समर्थन हुँदाहुँदै पनि।
मंसिर ४ को संविधानसभा निर्वाचनमा खनालले कस्तालाई उम्मेदवार बनाएछन्? अघिल्लो संविधानसभामा अन्य पार्टीका नेताहरूले भन्ने गरेका थिए, 'आधा एमाले कांग्रेसजस्तो, आधा एमाले एकीकृत माओवादीजस्तो।' कतै खनालले एमालेका नेतालाई भनेर वितरण गरेको टिकट अन्तै त परेन?
अरू दललाई पनि मिलाएर एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने भन्दै जनतामाझ पुगेका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरू आफैँ भने मिल्न सकेनन्। घर मिलाउन नसक्नेले अरूलाई मिलाउने र अरूसँग मिल्ने त कुरै भएन। पार्टी प्रमुख नै संसदीय दलको नेता हुने परम्परालाई एमालेले पनि तोड्यो। उसले पनि कांग्रेसलाई पछ्याउँदै दलको नेतामा निर्वाचन गर्योी। निर्वाचनमा शीर्ष नेता भिडिरहँदा अन्य नेताहरू भने हाँसोठट्टामा समय काटिरहेका थिए।
दलको नेताका लागि केपी ओलीस“ग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल भोट माग्दा या दलको कार्यालय बाहिर/भित्र गर्दा हरहमेसा वरिष्ठ नेता नेपालस“गै हुन्थे।
संसदीय दलको कार्यालय प्रांगणमा स“गै देखिएका अध्यक्ष खनाल र नेपालको फोटो खिच्ने क्रममा दुवै जनाले हा“समजाक गर्न भ्याए। 'कति हाम्रोमात्रै फोटो खिच्नुहुन्छ, लौ आज म तपाईंहरूको फोटो खिच्छु,' अध्यक्ष खनालस“गै कुम जोडेर बसेका वरिष्ठ नेता नेपालले आई–फोन तेर्स्याउ“दै फोटो पत्रकारस“ग ठट्टा गरे।
खनाल र नेपालको जोडी जमिरह“दा अर्कातिर समूह बनाएर हि“डेका ओली र गौतमको जोडी पनि कम थिएन। ओली अघिअघि लागेर भोट मागिरह“दा पछिपछि लागेर गौतमले सघाइरहेका थिए।
ओली लाइनमा बसेका सभासद्लाई उखान/तुक्का सुनाउँदै फकाइरहेका थिए। ओलीले भोट मागेको सुनिरहेका ओलीकै लाइनका सभासद् रामेश्वर फुया“लले पनि ओलीलाई जिस्क्याउन भ्याए। 'कमरेड, यस्तै जु“गा भएको फोटो तपाईंको छैन भने मतदाता झुक्किन्छन् नि।' दुइटा समूहमा भोट मागिरहेका दुवै नेता एउटा समूह नजिक हु“दा अर्कातिर टेढिन्थे।
'गाउँलाई चारो होइन, पखेटा दिनुपर्छ'
लामो कपालमा सेतो रङ लगाएका २८ वर्षे युवा सुदन गुरुङ जति 'क्याजुअल' देखिन्छन्, त्यत्तिकै पाको पनि छन्। भूकम्पले दिएको चोटमा मलम लगाउन यी युवा र साथीहरूले निर्वाह गरेको भूमिका साँच्ची...
कसैले डिस्टर्ब नगर्ने एकान्त ठाउँमा प्रेमालाप गर्न पाइयोस्– डेटिङ स्पटको न्यूनतम आवश्यकता वा विशेषता यही हो। तन्नेरी पुस्ताको चाहना पनि हो यो।
चौथो अंगमा कोढ सल्किनुअघि
सञ्चारमन्त्री हुनेबित्तिकै डा. मीनेन्द्र रिजालले धुवाँदार घोषणा गरे– ‘पत्रकारितालाई मर्यादित बनाउँछु।' उनको बोलीको मजबुन थियो– ‘पत्रकारिता जगत् एकदम अमर्यादित र भ्रष्ट छ।'
किन टिक्दैनन् हिरोइन ?
नेपाली फिल्ममा हिरोइन बन्ने प्रक्रिया के हो ? आजसम्म कसैलाई थाहा छैन । सेतो पर्दामा अनुहार देखाउने रहर र महत्वकांक्षाले थुप्रै युवती हरेक वर्ष फिल्म क्षेत्रमा हाम्फाल्छन् । र, डुब्छन्...
किचकिचे घरभेटी, घामड डेरावाल
देशका सबै भागबाट एउटा–एउटा सपना बोकी असंख्य मान्छे काठमाडौँ आएका छन्। साँघुरिँदै गएको काठमाडौँमा साँघुरो कोठामा असुविधाजनक जीवन बाँचिरहेका डेरावालहरू लाखौँ छन्। घरभेटी र डेरावालको सम्बन्ध सदा द्वन्द्वग्रस्त रहिआएको छ।...
रविनको तीखो व्यंग्यवाण
म दाबी गर्न सक्छु, भुइँचालोले कार्टुनिस्ट रविन साय्मिको हृदय पनि हल्लाइदिएको थियो। खासगरी जो वैशाख १२ गतेको शक्तिशाली भुइँचालोमा काठमाडौँ उपत्यका र वरपरका जिल्लामा थियो, उनको हृदय त्रासदीको वल्लो छेउदेखि...
भारतको अशोभनीय रवैया
संसारकै ठूलो लोकतन्त्रका रूपमा चिनिने निकट छिमेकी भारतले नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा अपनाइएको लोकतान्त्रिक विधिमाथि औँला उठाएको छ। नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा आफ्नो हिस्सेदारी सुरक्षित गर्दै आएको भारतले संविधान निर्माणका...
अविवाहित अभिनेत्रीका तीज
यसपालिको तीज परिवारसँग मनाउने कार्यक्रम छ। घरमै बसेर रमाइलो गर्ने हो। व्रत सधैँ बस्छु। यसका, उसका लागि होइन, बानीका कारण व्रत बस्ने गर्छु। सकियो भने केही पनि नखाने तर सकिएन...